2019 Camerimage ရှိ Panavision ၏အဆုံးမှအဆုံးဂေဟစနစ်ကိုအတွေ့အကြုံ - Broadcast Beat မှ NAB Show News၊ NAB Show ၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်သူ - NAB Show LIVE
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » 2019 Camerimage ရှိ Panavision ၏အဆုံးမှအဆုံးသို့ဂေဟစနစ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားပါ
Panavision နှင့်၎င်း၏မိသားစုကုမ္ပဏီများသည်နိုဝင်ဘာ 9-16 မှပိုလန်နိုင်ငံ၊ Torun ရှိ EnergaCamerimage International Film Festival သို့တက်ရောက်သူများအတွက်စွဲငြိဖွယ်ရာအဆုံးမှအဆုံးအထိတွေ့မြင်နိုင်သည်။ Jordanki Festival Center ၏လမ်းတစ်လျှောက် Torun ၏အသစ်ပြုပြင်ထားသော Karczma Damroki စက်ရုံသည် PanaVillage ဟုခေါ်သောအပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်ပွဲတော်အာကာသအဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးပေါင်းစပ်ထားသောနည်းပညာများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပြသမည်ဖြစ်သည်။ Panavision, Panalux, အလင်းကိုသံ, လီစိစစ်မှုများနှင့် တိုက်ရိုက်ဒီဂျစ်တယ်.
Panavision ၏ဥက္ကpresident္ဌနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Kim Snyder က“ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ကိရိယာတွေကိုတွေ့ကြုံခံစားခွင့်ပေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့နှင့်ကုန်ပစ္စည်းကျွမ်းကျင်သူများသည်တက်ရောက်သူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆုံးမှအဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အတူလက်တွေ့အတွေ့အကြုံ၌ပါ ၀ င်ရန်မျှော်လင့်ကြသည်။ ”
PanaVillage တွင် guests ည့်သည်များသည် Panavision ၏ကင်မရာနှင့်မှန်ဘီလူးများ၊ အလင်းရောင်၊ စစ်ထုတ်စက်များ၊ ဂျယ်လ်၊ T ည့်သည်များသည် SuperTechno 8 ရိန်းပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့် 2K Millennium DXL30 ကြီးမားသောကင်မရာ (0.6 မိုင်) နှင့်အတူဆန်းသစ်သောကြိုးမဲ့ဖိုင်ဘာနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ Primo 70 မှန်ဘီလူးရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး Panavision ၏ LCND filter သည်အမျိုးမျိုးသောသိပ်သည်းမှုမှတ်တိုင်ခြောက်ခုကိုပေးသည်။ LINK HDR လှည်းပေါ်ရှိ PanaVillage အတွင်းရှိ 4K ဗွီဒီယိုကိုစောင့်ကြည့်နေစဉ် ests ည့်သည်များသည်ကင်မရာ၊ မျက်ဝန်းနှင့် LCND filter ကိုအဝေးမှချိန်ညှိနိုင်သည်။ Panavision နှင့် Light Iron ၏ LINK HDR စနစ်သည် Cine Gear Expo တွင်ပြသခဲ့သည် Los Angeles မြို့ ယခုနှစ်အစောပိုင်းကယခု feature နှင့်ဇာတ်လမ်းတွဲစီမံကိန်းများအတွက်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ PanaVillage guests ည့်သည်များသည် Panavision LINK HDR လှည်းနှင့် Light Iron LINK HDR နေ့စဉ်သတင်းစာများနှင့်အပြီးသတ် ၀ န်ဆောင်မှုများသည် HDR ရုပ်ပုံများကိုတီထွင်ဖန်တီးမှုအားလုံး၏လက်သို့ - ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများ၊ အယ်ဒီတာများနှင့်ရောင်စုံဝါဒီများအကြား - ပုံရိပ်ကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးတွင်တွေ့မြင်ခံစားနိုင်သည်။
PanaVillage အတွင်း၌ရှိစဉ်တက်ရောက်သူများသည် DXL2 ကင်မရာနှင့်ပိုမိုကျစ်လစ်သော DXL-M စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ထူးခြားသောအသွင်အပြင်ကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်တီထွင်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ မြင်ကွင်းကိုဘောင်ခတ်ရန် T1.4 Panaspeeds အပါအ ၀ င်ကြီးမားသောမှန်ဘီလူးအမြောက်အများကိုရရှိလိမ့်မည်။ ည့်သည်များသည်မြင်ကွင်းကိုထွန်းလင်းနိုင်ပြီး Panalux နှင့်တတိယပါတီရွေးစရာများဖြင့်အလင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ တိုးချဲ့ထားသော Zircon LED gels အပါအ ၀ င် LEE Filters ၏အလင်းရောင်ဂျယ်လ်အားလုံးသည်မြင်ကွင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
PanaVillage visitors ည့်သည်များသည် LEE Filters များ၏ ProGlass CINE IRND ကြားနေ - သိပ်သည်းဆစစ်ထုတ်စက်များနှင့်ပေါ့ပါးပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သော 100mm ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာ filter filter mount စနစ် LEE100 နှင့်လည်းတွေ့လိမ့်မည်။ Direct Digital မှကျွမ်းကျင်သူများသည်ရုပ်ငြိမ်နှင့်ရွေ့လျားခြင်းငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးရန်ရှိနေသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူရန် looking ည့်သည်များသည် Panastore ကို Jordanki Festival Center တွင်ရှာနိုင်သည်။ Panavision အဖွဲ့မှစီစဉ်သောနောက်ထပ်အသေးစားအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကိုတစ်ပတ်လုံးလုံးစီစဉ်ထားပြီးအချိန်နှင့်တပြေးညီအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Panavision ၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်များတွင်မျှဝေမည်ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်တွင် Panavision သည် ASC EnergaCamerimage Lifetime Achievement Award ရရှိသူဂျွန်ဘေလီထံမှရုပ်ရှင်နောက်ကြောင်းပြန်ကိုပံ့ပိုးပေးသည့်အတွက်ဂုဏ်ယူသည်။ 12 မှနိုဝင်ဘာလ 15 - CinemaCity မှ 00h တွင်၊ ဘေလီသည်သူ၏အထင်ကြီးလောက်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုမှထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုတင်ပြပြီး 40 နှစ်ပေါင်းများစွာကိုခရက်ဒစ်အပါအဝင် သာမန်လူများ၊ ကြီးမားသောချမ်း, ခြင်း၊ မီးလိုင်းရှိအမေရိကန်ဂျီဂိုလို၊ ဝုဒ်ရှိလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ နှင့် မတော်တဆခရီးသွား။ ည့်သည်။ Panavision ၏ Bailey နှင့်နှစ်ရှည်လများဆက်ဆံခဲ့သောကြောင့် 2004 AWZ2 (သို့မဟုတ်“ Bailey Zoom”) သည်မှန်ဘီလူးရှေ့တွင် anamorphic element များကိုအသုံးပြုရန်ပထမဆုံးခေတ်မီ zoom ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Panavision ၏အဆုံးမှအဆုံးသို့ကမ်းလှမ်းမှုများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ www.panavision.com။ EnergaCamerimage အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်၊ သွားပါ camerimage.pl/en/.
ထုတ်လွှင့်-SocialMeida ကင်မရာများ Camerimage ရုပ်ရှင်ပညာ တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော Panavision SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို လုပ်ငန်းအသွားအလာ	2019-10-30
ယခင်: KCRW သည်ခေတ်မီသောရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနနှင့်မီဒီယာဌာနချုပ်အသစ်ကိုတည်ဆောက်သည်
နောက်တစ်ခု: Entry Level Marketing တွဲဖက်